Yunaaytid Isteets Kaawunsilii Mirga Dhalaa Namaatti Deebite
Yunaaytid Isteetes bara dhufu jechuun 2022tti kaawuunsilii mirga dhala namaa kan Tokkummaa Mootummootaatti dabalamuuf jirti.Kunis prezidaant Baaydiin kabajamuu mirga dhala namaaf imaammata alaa biyyi isaanii qabaattu irratti waadaa prezidaant Baaydin seenan hojitti hiikuuf gargaara.
Kaawunsiliin kung ama mirga dhala namaa kabajsisuun qooda barbaachisaa kan qabaatu yoo ta’u, fixiinsa dhaqqaban galmeessuun kanneen isaaf itti gaafatamoo seera duratti dhiyeessuuf walabummaa bu’uraa qabaata jedhan ministeerrii haajaa alaa Amerikaa Antonii Bliinke.
Haaloota hatattamaa fi rakkoo dhiittaa mirga anmoomaa dhuma hin qabne irratti qiyyaafachuun, kanneen sagaleen isaanii ukkaamfamee akka dhaga’amuu gochuu irratti fulleeffachuqaba.
Kaawunsiliin kun waltajjii irratti marii banaa ta’e itti gaggeesinuu qopheessuun, waan nutii fi michoonni keenya foyyeessuu qabnu irratti mariisiisa.
Ituuma kana gochaa jiruu jedhan Bliinkan akeekkachiisa kennaniin, kaawunsiliin mirga dhala namaa kan Tokkummaa Mootummootaa, haala kallatti sirrii hin hoedoofnee, kan akka Israa’eeliif ilaalcha kanneen biroo waliin wal hin ginnee kennuu fi biyyoota miseensa ta’anii galmee dhiittaa mirga namoomaa hamaa qabaniin hojiin seeraan ala ta’an hojjatamuu maluu jedhan.
Kanaaf jedhan Bliinkan, tokkummaan kanneen qajeelfama kaawunsiliin mirga namoomaa irratti hundeeffamee tuffatan irratti dhiibbaa gochuu qabna jedhan.
Kunis namnii mata mataatti mirga dhala namaa akka qabu akkasumas mootummonni mirga dhunfaa kana kabajuuf dirqamnii akka jiru kan jedhu dabalachuu qaba jedhan.
Tokkummaa Mootummootaatti Ambaasaadarri Yunaaytid Istetes Lindaa Toomaas Green Fiild akka jedhanti, miseensa guutuu kaawunsilichaa ta’uun Yunaaytid Isteetes, Afgaanistaan, Barmaa, Chaayinaa, Itiyophiyaa, Siriyaa fi Yaman keessatti waan hojjatamuu qabu irratti fulleeffachuuf jira.
Sana caalaatti immoo, bu’uraaleen Bilisummaa fi mirga dubartootaa akka kabajaman akkasumas amantii ilaalchiisee walii obsa dhabuu, adda addummaa gosaa irratti haqnii dhabamuu, fi gareelee sab xiqqaalee irratti hokkaraa fi loogii gaggeeffamu dhabamsisuu ta’a jedhan Griin Fiild.
Yunaaytiid Isteetes filannoo biyyoota galmee dhiittaa mirga anamoomaa hamaa qaban keessatti gaggeeffamuu kan mormiitu yoo ta’u, kanneen biyya ofii keessattis haa ta’u biyyaa alaa keessatti mirgii dhala namaa akka kabamuu fi eegumsa barbaachiisu taasiisan miseensummaa akka argatan jajjabeessitii.
Hunda kan hirmaachiisee mirgii kan itti kabajamee, fi hanga danda’ameetti wallaba akka ta’uuf yeroo hundumaa carraaqqii taasiifna jedhan Ambasaaadar Griin fiild.
Yunaaytid Isteetes kaawunsilii mirga dhala namaa keessa akka tajaajiltuuf carraa kennameef biyyoota miseensa Tokkummaa Mootummootaa kan galateeffatan Antonii Bliinken, mirga dhala namaa eeguuf, kabajsisuuf akkasumas akka hojii irra ooluun isaa tarkaanfatuu gochuuf hojiin kaawunsilii kanaa sadarkaa addunyaatti akka baramuuf michoota keenya kan addunyaa waliin hojjachuu feena jedhan jechuun gulaalaan har’a yaada isaa xumuree jira.